भारतले कब्जा गरेको करिब ६०००० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन गरिदै यस्तो पहल (दवाव दिनको लागि शेयर गरौं)
भारतले कब्जा गरेको करिब ६०००० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन गरिदै यस्तो पहल (दवाव दिनको लागि शेयर गरौं) काठमाडौ । लामो समय देखि सुगौली सन्धी पछिको नेपाल फिर्ता माग्दै आएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नयाँ कदम चाल्ने भएको छ । नयाँ वर्षसँगै मोर्चाले अनप्रेजेन्टेड नेसन्स एण्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन (युएनपीओ) मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जनाउनु भएको छ ।
तपाईलाई जानकारी गराउँ सरकारसँग सहमति हुनुअघि डा. सिके राउत नेतृत्वको संगठनले पनि आफ्ना एजेण्डा युएनपीओमा दर्ता गराइसकेको छ । सरकारको दाबी अनुसार डा. राउतले आफ्नो पुरानो अभियान अहिले छोडिसक्नु भएको छ । राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले वक्तव्य मार्फत भन्नु भएको छ , ‘‘नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई मधेस नाम दिएर त्यहाँ नेपालले उपनिवेश कायम गरेको छ भन्दै यसलाई स्वतन्त्र देश बनाउन केही राष्ट्रघातीहरूले गरेको दुष्प्रयासलाई ११ बुँदे सहमतिमार्फत् सरकारले अनुमोदन गरेपछि यसविरुद्ध जनस्तरबाटै बौद्धिक आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।’
उहाँले अगाडी थप्नु भएको छ, ‘‘यस सन्दर्भमा आज नयाँ वर्ष २०७६ का अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिमा गुमाएको र विगत लामो समयदेखि भारतीय उपनिवेशमा रहेको करिब ६०००० वर्ग किलोमिटर भूमिलाई मुक्त गरी नेपालमा पुनर्एकीकृत गर्न युएनपीओमै सप्रमाण निवेदन दर्ता गराउन जाने निर्णय गरेको सबै नेपालीहरूमा जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’उहाँका अनुसार युएनपीओले आफ्नो गतिविधिमा उपनिवेशमा रहेको जमिनको स्वतन्त्रतालाई पनि समावेश गरेकोले निवेदन दर्ता गर्न लागिएको हो । उहाँले यस भन्दा पहिले पनि यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायका बिच राखिसक्नु भएको छ । उहाँ लामो समय देखि भारत विरोधी गतिविधिहरुमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले समयसमयमा कारबाही पनि गर्ने गरेको छ । तर अहिले उहाँलाई जनताको बलियो सर्मथन रहेको छ त्यसैले उहाँको माग सम्बोधन हुने संकेत पनि देखिन थालेको छ ।